Spirit Airlines dia mandefa serivisy vaovao any Cap-Haïtien, Haiti
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Spirit Airlines dia mandefa serivisy vaovao any Cap-Haïtien, Haiti
Ny morontsiraka mahatalanjona sy ny olona mahatalanjona dia miandry anao hiarahaba anao rehefa mihalehibe any Karaiba indray ny Spirit Airlines! Amin'ny 12 aprily 2018, i Spirit dia hampifandray ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenenan'i Cap-Haïtien (CAP) ao amin'ny tanàna lehibe indrindra faharoa any Haiti. Ity sidina vaovao ity dia manamarika ny toerana faharoa ahatongavan'i Spirit any Haiti, manampy ny serivisy ho an'ny Port-au-Prince (PAP) efa misy.
Fanampin'izany, ny sidina ambany saran-dàlana mankany amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Princess Juliana (SXM) any St. Maarten dia hanomboka amin'ny 5 Mey 2018 satria mitohy ny fanarenana ary mitombo ny fahafahan'ny fizahantany taorian'ny fiantraikan'ny rivo-doza tamin'ny taon-dasa. Spirit dia hampifandray an'i Florida atsimo amin'ny seranam-piaramanidina Henry E. Rohlsen (STX) any St. Croix, toerana faharoa alehan'ny Fanahy any amin'ny Nosy Virgin US, manomboka amin'ny 24 Mey 2018.
Ny fanoloran-tenan'ny Fanahy amin'ny fanitarana any Karaiba dia misy ihany koa ny serivisy fanao andavanandro manomboka any Fort Lauderdale ka hatrany amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Norman Manley (KIN) any Kingston, Jamaika.
Ireto serivisy vaovao sy mivelatra ireto dia ampahany mitombo amin'ny fanoloran-tena ataon'ny Fanahy hahatonga ny dia an-dranomasina ho mora vidy kokoa any Karaiba mandritra ny taona maro.
Fanitarana / famerenana amin'ny laoniny ny serivisy Karaiba:
Làlan-kizorana: Frequency datin'ny fanombohana
Fort Lauderdale (FLL) mankany / avy
Cap-Haïtien, Haiti (CAP) 12 aprily 2018 3x isan-kerinandro, mandavantaona
Kingston, Jamaica (KIN) 12 aprily 2018 Isan'andro, fizaran-taona
St. Maarten (SXM) 5 Mey 2018 Sabotsy, mandavantaona
St. Croix (STX) 24 Mey 2018 3x isan-kerinandro, mandavantaona
"Faly i Spirit fa hanohana an'i Karaiba amin'ny famerenany ny laoniny, rehefa nanolotra sidina fanampiana ho an'ny olona mihoatra ny 3,000 izy ary nandefa kojakoja fanampiana maherin'ny 120,000 pounds hatreto," hoy i Mark Kopczak, filoha lefitry ny Network Planning. "Ny herim-po sy ny fanoloran-tenan'ny olona any Karaiba dia nahagaga kokoa, ary faly izahay hitondra bebe kokoa ny Vahininay hankafy ny atiny rehetra atolotry ny nosy."
IATA: Milamina ny volan'ny sidina ao amin'ny 2H17
Birao Fivoriamben'i Greater Bogotá: Fanentanana vaovao hanehoana ny herin'ny olona